“Fatih ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဟာအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့ Galatasaray ၀ န်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်သမ္မတဖြစ်လာတဲ့အခါ Galatasaray Sportif AS မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးချင်ပါတယ်။ နည်းပြအဖြစ်လည်းပါ ၀ င်ပါတယ်။ ဘဏ္toာရေးအခြေအနေကိုဆရာကိုရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်၊ ဒါကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောဖို့လိုပါတယ်။ သမ္မတမဟုတ်ဘဲအားကြီးသောသမ္မတသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဂလာတိဆာရာအတွင်းမှလာသည့်သမ္မတသည်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်စွာချမှတ်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးအသင်းကိုရရှိခြင်းသည်အားကြီးသောသမ္မတဖြစ်သည်။
Mustafa Cengiz ၏အုပ်ချုပ်မှုကိုလည်းဝေဖန်သူ Ozan Korkut, “Mustafa Cengiz အုပ်ချုပ်ရေးကိုငါအောင်မြင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါအုပ်ချုပ်ရေးကိုမထုတ်ပေးခဲ့ဘူး။ ငါအထွေထွေညီလာခံထဲမှာမတူညီတဲ့ဆောင်းပါးသုံးခုကိုပြောခဲ့တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီဖော်ပြခဲ့တဲ့စီမံကိန်းဘယ်နှစ်ယောက်ပြုမိပါပြီ? 30 စီမံကိန်းများ၏သာအနည်းငယ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဝင်ငွေထုတ်လုပ်ပြီးမဟုတ်ပါကလွှဲပြောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုရေးဆွဲအနာဂတ်အစီအစဉ်ကဘာလဲ? ဤပစ္စည်းမလုံလောက်သောကြောင့်ငါကဖြန့်ချိမပြုခဲ့။ ငါအလုံအလောက်ငါကပြောသည်မည်သူမဆို, ဒါပေမယ့်အမှားတွေကိုပြင်ပေးဖို့ “ အသုံးပြုအသုံးအနှုန်းတွေ။
RESTBET501 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETPAS423 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETBOO868 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ RESTBET501 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETPAS423 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETBOO618 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ SUPERBAHİS489 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ SUPERTOTOBET0120 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ SULTANBET561 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ BETBABA100 GALATASARAY’DA FATİH TERİM’E TRANSFER GARANTİSİ
12 Comments on BETBABA138 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’
SEVGÜL November 27, 2020 at 2:40 pm
BİLGİN November 28, 2020 at 3:50 am
IŞIK November 28, 2020 at 9:00 am
AHMET November 29, 2020 at 3:00 am
ONUR November 29, 2020 at 8:40 am
UMUT SEDA November 29, 2020 at 7:20 pm
GÜLŞEN December 2, 2020 at 10:40 pm
AHMET December 4, 2020 at 2:50 pm
MEHMET December 6, 2020 at 9:50 am
YUSUF December 7, 2020 at 5:00 am
YILDIRIM December 9, 2020 at 11:20 am
TEVFİK ÖZGÜN December 10, 2020 at 6:10 am